Record Music Site Radio / Rdio ka iTunes
Mepee software nke TunesGo na PC gị na site abụọ na ịpị ya akara ngosi na a n'ụlọ peeji dị ka n'okpuru ga-apụta.
Nzọụkwụ 2. Họrọ Record
Ugbu a na n'aka ekpe menu nke TunesGo obibi peeji, họrọ nhọrọ nke "ndekọ". (Nseta ihuenyo egosi red akara igbe)
Nzọụkwụ 3. play Radio / Rdio
Ugbu a na-egwu ọkacha mmasị gị Radio ma ọ bụ Rdio site na nke ị na-achọ ka ịdekọ gị music. (Rdio a na-egwuri ọ n'okpuru nyere screenshot)
Nzọụkwụ 4. Pịa "rec"
Dị ka music na ọkacha mmasị gị Radio ma ọ bụ Rdio na-egwuri, pịa nhọrọ nke "rec" nke ga-amalite ndekọ nke track na a na-egwuri. (Nseta ihuenyo-egosi na ndekọ na-enwe ọganihu)
Nzọụkwụ 5. Find songs ke "dere"
Ozugbo ndekọ zuru ezu ya ngosi ga-anya n'akụkụ nhọrọ nke "dere" na n'aka ekpe nke menu n'okpuru iTunes Library.
On-emeghe dere ndepụta, ndị ọhụrụ ga-abụ ahụ anya (screenshot egosi Track 3 dị ka ndị ahụ e dere song)
Ọzọ: Site Radio na-iPhone / iPad / iPod